छोराछोरीलाई यौवनावस्थाबारे बुझाउनुहोस्
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गान्गेला उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
तपाईंले आफ्नो सानो बच्चालाई काखमा खेलाएको हिजोजस्तै लाग्छ होला। अहिले भने ऊ किशोरावस्थामा प्रवेश गर्नै लागेको छ। बच्चाहरू वयस्क हुनुअघि तिनीहरूले यौवनावस्था पार गर्नुपर्छ। यौवनावस्था बाल्यावस्था र किशोरावस्था बीचको समयावधि हो। यस अवस्थामा बालबालिकाहरूमा थुप्रै शारीरिक परिवर्तन हुन्छ। तपाईंको छोराछोरी पनि यस्तै अवस्थामा छन्‌ कि?
यौन परिपक्वतातर्फ अघि बढ्‌दा बालबालिकाहरूलाई भावनात्मक रूपमा गाह्रो हुन्छ। यस्तो बेला तपाईं आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ?
यौवनावस्था सुरु हुने समय निश्‍चित हुँदैन। यो अवस्था छिटोमा आठ वर्ष अनि ढिलोमा १४/१५ वर्षमा सुरु हुन्छ। छोराछोरी हुर्काउने सन्दर्भमा एउटा किताबमा * यस्तो लेखिएको छ, “सामान्यतया यौवनावस्थको सुरुवात ठ्‌याक्कै यही उमेरमा हुन्छ भनेर तोक्न सकिंदैन।”
यौवनावस्थामा आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ। किशोरकिशोरीहरू आफूबारे अरूले के सोच्छन्‌ भनेर असाध्यै चिन्ता गर्छन्‌। जोन * नाम गरेका किशोर यस्तो भन्छन्‌, “म कस्तो देखिन्छु अनि अरूसित कस्तो व्यवहार गर्छु भन्ने कुरामा सधैं सचेत रहन्थें। मेरो बारेमा अरूले के सोच्लान्‌ भनेर असाध्यै चिन्ता लाग्क्थ्यो।” डन्डीफोर आउँदा आत्मविश्वास अझै गुमेको जस्तो लाग्न सक्छ। कविता नामकी १७ वर्षीया किशोरी यस्तो भन्छिन्‌, “डन्डीफोर आउँदा मेरो अनुहार कुरूप भएको जस्तो लाग्क्थ्यो। म धेरै रुन्थें।”
चाँडै यौवनावस्थामा प्रवेश गरेकाहरूलाई झनै गाह्रो हुन्छ। विशेषगरि केटीहरूलाई गाह्रो हुन्छ किनकि तिनीहरूको स्तन र शरीरको विभिन्न अङ्‌गहरू बढ्‌न थाल्छ। त्यसबारे एउटा किताब * यस्तो भन्छ, “तिनीहरूप्रति त्यस्ता केटाहरू आकर्षित हुन्छन्‌, जसले किशोरीहरूसित यौनसम्बन्ध राखिसकेका हुन्छन्‌।”
यौवनावस्थामा पुग्नु परिपक्व हुनु होइन। बाइबलको हितोपदेश २२:१५ मा यस्तो लेखिएको छ, “बालकको हृदयभित्र मूर्खता गाडिएको हुन्छ।” यौवनावस्थाले यो तथ्यलाई बदल्दैन। कुनै युवक लाठे देखिएला तर ऊसित “सही निर्णय गर्ने क्षमता छ, अरूसित राम्रो व्यवहार गर्न सक्छ, आत्मसंयमी छ अथवा परिपक्व छ भन्न मिल्दैन” भनेर किशोरकिशोरीबारे लेखिएको एउटा किताब * बताउँछ।
यौवनावस्थामा पुग्नुअघि नै त्यसबारे कुरा गर्नुहोस्। छोराछोरीमा के-कस्ता शारीरिक परिवर्तन आउँछ भनेर तिनीहरूलाई बताउनुहोस्। जस्तै: छोरीहरूमा पहिलो महिनावारी र छोराहरूमा वीर्य पतन। यस्ता परिवर्तन अचानक हुने भएकोले तिनीहरू अलमल्लमा पर्न सक्छन्‌ अनि डराउन पनि सक्छन्‌। यौवनावस्थाबारे कुराकानी गर्दा सकारात्मक हुनुहोस्। वयस्क हुने पहिलो खुट्किलो नै यौवनावस्था हो भनेर सम्झाउनुहोस्।—बाइबल सिद्धान्त: भजन १३९:१४.
विस्तृत जानकारी दिनुहोस्। सज्जन नामका युवक पहिलाको कुरा यसरी सम्झन्छन्‌, “मेरो आमाबुबाले यसबारे भन्नु त भयो तर राम्ररी बुझाउनुभएन। उहाँहरूले सीधै भन्नुभएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।” अनिशा नामकी १७ वर्षीया किशोरीको पनि यस्तै अनुभव छ। तिनी भन्छिन्‌, “मम्मीले यस्तो अवस्थामा हुने शारीरिक परिवर्तनबारे बताउनुभयो। तर भावनात्मक रूपमा तयार हुन भने मदत गर्नुभएन।” यसबाट आमाबुबाले के सिक्न सक्छन्‌? कुराकानी गर्न अप्ठेरो लागे पनि आफ्ना छोराछोरीलाई यौवनावस्थामा हुने उतारचढावबारे बुझाउनुहोस्।—बाइबल सिद्धान्त: प्रेषित २०:२०.
खुलस्त कुराकानी गर्न प्रश्न सोध्नुहोस्। कुराकानी गर्ने वातावरण तयार गर्न यौवनावस्थासित सम्बन्धित अरूको अनुभव बताउनुहोस्। उदाहरणको लागि, तपाईं आफ्नो छोरीलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, “तिम्रो कुनै साथीले महिनावारी भएको बारेमा कुरा गरेको छ? छिट्टै बढेका केटीहरूलाई अरू साथीहरूले जिस्काएको देखेकी छ्यौ?” छोराहरूलाई चाहिं यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, “के तिम्रा साथीहरूले त्यत्ति नबढेका केटाहरूलाई जिस्काउँछ?” यौवनावस्थाले अरूमा ल्याएको परिवर्तनबारे कुरा गर्दा तपाईंको छोराछोरीले आफ्नो मनको कुरा खुलेर बताउन थाल्छ। तिनीहरूले आफ्नो कुरा बताउँदा बाइबलको यो सल्लाह पालन गर्नुहोस्, “चनाखो भई सुन्नुपर्छ, बोल्न हतार गर्नुहुँदैन।”—याकूब १:१९.
किशोरकिशोरीलाई ‘बुद्धिमान्‌ र विवेकी’ हुन मदत गर्नुहोस्। (हितोपदेश ३:२१, NRV) यौवनावस्थामा शारीरिक र भावनात्मक परिवर्तन हुने मात्र होइन। यस्तो बेला किशोरकिशोरीहरूले तर्क गर्ने क्षमता विकास गर्छन्‌, जसले गर्दा वयस्क भएपछि तिनीहरू सही निर्णय गर्न सक्नेछन्‌। छोराछोरीलाई असल कुरा सिकाउने यो नै राम्रो मौका हो।—बाइबल सिद्धान्त: हिब्रू ५:१४.
हार नमान्नुहोस्। थुप्रै किशोरकिशोरी यौवनावस्थाबारे कुरा गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता फरक छ। यसबारे एउटा किताब * यस्तो भन्छ, “यस्तो कुरामा चासो नभएको, झिजो मानेको अथवा नसुनेको जस्तो भान पार्ने किशोरकिशोरीहरू वास्तवमा कुरा सुनिरहेका हुन्छन्‌।” (g16-E No. 2)
^ अनु.7Letting Go With Love and Confidence
^ अनु. 8 नामहरू परिवर्तन गरिएका छन्‌।
^ अनु.9A Parent’s Guide to the Teen Years
^ अनु. 10 You and Your Adolescent
^ अनु. 16 You and Your Adolescent
“म भयानक र आश्चर्य रीतिले बनिएको छु।”—भजन १३९:१४.
“तपाईंहरूको लाभ हुने कुरा बताउन म पछि हटिनँ”—प्रेषित २०:२०.
‘परिपक्व मानिसहरूले आफ्नो सोच्ने-बुझ्ने क्षमता चलाएर त्यसलाई सही र गलत छुट्टयाउन तालिम दिएका हुन्छन्‌।’—हिब्रू ५:१४.
“यौवनावस्थामा हुँदा विशेषगरि मम्मीले मलाई धेरै मदत गर्नुभयो। उहाँले हरेक कुरा राम्ररी बुझाउनुभयो। ममा के-कस्तो परिवर्तन हुँदै छ अनि पछि के हुन्छ भनेर थाह थियो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा कहिल्यै आत्तिइनँ। यति मात्र होइन, मम्मीले कुराकानी गर्न सधैं सजिलो बनाइदिनुभयो। कुनै अप्ठेरो परिस्थिति आउँदा बुबाआमाले त्यसलाई सम्हाल्न मदत गर्नुभयो।”—मेरी, १६.
“मेरो बुबाआमाले मलाई साथ दिनुभयो। उदाहरणको लागि, उहाँहरूले मेरो अवस्था बुझ्नुभयो अनि हरेक कुरामा केरकार गर्नुभएन। मेरो अवस्थाबारे सबैलाई भन्दै हिंड्‌नुभएन। यसले गर्दा मलाई सजिलो भयो। यौवनावस्थामा मलाई के हुनेछ भनेर उहाँहरूले पहिल्यै बताउनुभयो।”—जोआन, १८.